LG kwupụtara ọkwa ọhụrụ anọ maka usoro X | Androidsis
LG amalitela ọkọlọtọ mara mma n'afọ a nke modularity na igwefoto ya abụọ ejirila etiti etiti, anyị ekwuola maka ya na nyocha m mere n'izu gara aga, ma ya mere ibu ezigbo isi iji mesoo ya na usoro ozo nke smartphones nke ga-abia site na onye mmeputa Korea a nke nwere usoro G ya amalitela ezigbo uzo iji megharia ezigbo ulo oru.
Taa ọ mara ọkwa a mmezi zuru ezu maka ya X nso na ọhụrụ ọhụrụ ọnụ na-abata na ebumnuche dị iche na nke ọ bụla n'ime ha. Ndị a bụ LG X Power, LG X Mach, LG X Style, na LG X Max. Onye ọ bụla n’ime ha nwere njirimara pụrụ iche nke na-abịa n’echiche nke dabara na mkpa nke ndị ọrụ dị iche iche mebere ahịa gam akporo. Ndị ahụ nwere ike ịbụ batrị ka ibu, igwe nrụpụta ka mma, ụdị nhazi elebara anya karị, ma ọ bụ nnukwu ihuenyo.
1 LG X Ike
1.1 Nkọwa LG X Ike
2 Xdị LG X
2.1 Nkọwa LG X Style
4 lg x kacha
LG X Ike
Ọ bụrụ na kọmpụta Z3 nke Xperia nwere nnukwu mmetụta na ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụ n'ihi ya ezigbo ọchịchị obodo nke a mere ka o ruo ụbọchị abụọ n’ebughị ibu ahụ. Ọ bụ ebe a ka anyị hụrụ X Power nke lekwasịrị anya na nke a nke ukwuu n'ihi batrị 4.100 mAh na ekwentị mkpanaka nke 7,9 millimeters.
Teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa na-enye X aka kwụọ ụgwọ okpukpu abụọ karịa ọsọ nkịtị, na-ekwe ka ndị ọrụ nwee ekwentị ha maka awa ole na ole.
Nkọwa LG X Ike
5,3-anụ ọhịa HD ihuenyo (1280 x 720)
MediaTek MT6735 quad-core chip mechiri emechi na 1.1 GHz
16GB nchekwa dị n'ime ya na nhọrọ iji gbasaa ya ruo 32GB site na microSD
13 MP n'azụ igwefoto na ikanam flash
8 MP n'ihu igwefoto
Njikọta: 4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS
Xdị LG X
Xdị X dị iche na tinye ngwoolu na imewe ya na ahịrị gbagọrọ agbagọ na ahụ dị mma. Ọ gụnyekwara nnukwu ihuenyo maka ahụmịhe dị ukwuu na ọdịnaya ọdịnaya, na-eme ka ọ dị mma maka nke a.
Nkọwa LG X Style
Ihe ngosi 5,3 ″ HD (1280 x 720)
Qualcomm Snapdragon 410 1,2 GHz mgbawa
Adreno 306 GPU GPU
Ihe nchekwa 16 GB dị n'ime nwere ike ịbawanye ya ruo 128GB na kaadi microSD
Njikọ: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.1, GPS
Batrị 2.100 mAh na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
Ngwaọrụ nke nwere LTE Cat. 9 3CA maka ọsọ ọsọ na-abịa yana ihe nhazi 1.8 GHz iji nye ezigbo arụmọrụ. Ọ nwere Ngosipụta QHD IPS Quantumm maka ihe oyiyi dị nkọ ma doo anya na na atụmatụ ya ọ nwekwara akụkụ ahụ maka njide zuru oke na aka. O nwekwara igwefoto nwere ihe mmetụta 1.55um iji nweta foto dị mma n'ọnọdụ ọkụ dị ala.
Anyị enweghị ike ịgụta atụmatụ ndị ọzọ nke ekwentị a, yabụ anyị ga-echere ndị nrụpụta Korea Kee ha mgbe ụfọdụ.
lg x kacha
Dị ka aha ya na-egosi, anyị na-aga na phablet ekwentị nke ga-ezute na Xiaomi Mi Max nke ọ fọrọ nke nta ka ọ nweta aha ahụ. Ebe a ọ dịghị ihe anyị maara nke a terminal, ma anyị chere na anyị ga-eje ije n'ihu a phablet nke ga-agafe 5,5 sentimita asatọ.
Anyị ga-echere maka ozi ndị ọzọ sitere na LG iji nwee ike kwuo banyere ọnụahịa, ụbọchị ịhapụ na ndị ọzọ nkọwa na anyị hapụrụ nke LG X Max na LG X Mach, abụọ smartphones na-ka na-anọgide a bit na ihe omimi, ọ bụ ezie na anyị maara ebe ha ga-sere, ọ dịghị ihe ọzọ na ndị pụrụ iche e ji mara.
una nweta nkwalite maka X usoro nke anyi nwere olile anya imata n’oge na-adighi kwa onu ahia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG mara ọkwa X Power, X Mach, X Style na X Max
Shazam maka gam akporo nwere ike ịchọpụta ụdị egwu ị na-ege